Kuderedza Ngoro Dzakasiiwa Ino Mwaka weZororo: Matipi masere eKukanganisa Kutengesa | Martech Zone
Kuderedza Ngoro Dzakasiiwa Ino Mwaka weZororo: Matipi masere eKukanganisa Kutengesa
Chitatu, December 14, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Curt Bloom
Ini ndichangobva kutarisa a Video yemaneja weTarget akamira pamusoro pechikwereti chake, achipa hurukuro inomutsa kune vashandi vake asati avhura musuwo kune vatengi veChishanu Chishanu, kuunganidza mauto ake sekunge ari kuvagadzirira kurwa.
Muna 2016, iyo mayhem yaive nhema Chishanu yaive yakakura kupfuura nakare kose. Kunyangwe vatengi vakashandisa paavhareji $ 10 pasi pezvavakaita gore rapfuura, paive nemamiriyoni matatu evatengi veChishanu veChishanu muna2016 kupfuura muna 2015, vachityaira $ 3.34bn (a 33% kuwedzera) mukutengesa.
Nekudaro, netsitsi kune vashandi avo vaifanira kuzvishingisa pachavo kumaseji, huwandu hwakawedzera hwevatengi vakasarudza kutenga pamhepo, panzvimbo pezvitinha nezvitoro zvezvitoro. Muna 2015, vanhu vangasvika mamirioni zana nemakumi mapfumbamwe vakatenga online panguva yeChishanu Chishanu, zvichienzaniswa nemamirioni 103 emuchitoro. Gore rino, shanduko iyi yatonyanya kuve nemukurumbira, nevatengesi vanopfuura mamirioni gumi nemasere vachitenga pamhepo, uye mamirioni makumi masere nemakumi mapfumbamwe nemashanu vachishingirira mabhajiro mumunhu zvinoenderana NRF.
Kunyanya, nhare yakabuda semukundi weChishanu Chishanu 2016, nevatengesi vanosanganisira Amazon, Walmart, uye Target vachishuma zuva ravo rakabatikana kwazvo kune traffic traffic. Kunyangwe Chishanu chisati chapera, vatengesi vanga vataura rekodhi $ Miriyoni 771 mune mari kubva kumafoni e #mobile
Zvirinani zviripo, mitengo yekutendeuka inonzi ine yakawedzera ne16.5% kubvira 2015, iine ngoro yekusiya mitengo inodonha ne3%. Kunyange iwe uchigona kufunga kuti ichi chikonzero chekuburitsa Prosecco uye kuzvikorokotedza pabasa raitwa nemazvo, mamwe maonero anodikanwa: muna 2016, vatengesi vachiri kurasikirwa 69% yepamhepo Vatema Chishanu vatengi vakasiya kutenga kwavo.
Hapana sangano rinoda kusiya mari patafura, uye kuyedza kuitora kunopa mujaho wakanangana nenguva - mushure mezvose, havasi vatengi vazhinji vangangoramba vachienderera nekutenga zvinodhura kana Chishanu Chishanu chapfuura. Zvakare, zvimwe zvenguva dzose zvekurudziro zvinokurudzirwa hazvishande mune ino kesi. Uine izvo mupfungwa, heano matipi mashoma ekuti usvike pangoro kupora panguva ino Yezororo.
Iva nehungwaru: Real-nguva kushambadzira software inofanirwa kuve yako yekutanga poindi. Netekinoroji iyi, izvi zvinokutendera iwe kuvaka maemail ane 'smart block' - zvikamu zvemukati zvemukati izvo zvinokutendera iwe kuisa mabanner, kuverenga nguva, kurudziro yetsika uye humbowo hwemagariro mune ako mameseji akakonzera kudzoreredza.
Yechokwadi-nguva yekutevera: Nenguva ndeyechakakosha, kugona kuongorora kusiiwa kwengoro sezvazvinoitika kwakakosha. Nepo dzimwe nzira dzingatora kanguva kukunyevera nezve kusiiwa (kumirira chikamu kuti upedze nguva, semuenzaniso), shandisa software inogona kuteedzera kusiiwa mune chaiyo-nguva, zvichikurumidza kukonzera email yekudzosa ine zvirimo mudengu ravo.
Ita kuti kudzoka kwavo kuve nyore: Kana iwe uchida kuti mutengi adzoke, zviite nyore kwavari. Zviri mukarori kavo, zvakakwana nemeso anokwezva echigadzirwa chavo, zvinopera pasina kutaura, uye nekudaro panofanirwa kuve neakakurumbira ekudaidzira-chiito chinovaita kuti vakurumidze kudzoka parwendo rwevatengi kunotora kwavakasiya.
Ita kuti ive yako pachako: Chiyeuchidzo chinyoro nekwaziso wega uye / kana kurudziro yakasarudzika yekukwikwidza ngoro yavo inogona kwete kungoedza ivo chete asi zvakare kukurudzira zvimwe zvekufungidzira zvekutenga.
Gadzira pfungwa yekukurumidzira: Kana iyo pfungwa yemamirioni evamwe vatengi panguva imwechete vachitsvaga zvibvumirano haina kukwana kukurudzira kutenga, email yekudzoreredza iyo inoratidza ako azvino masheya masheya inogona kusimbisa iyo chaiyo imba.
Vayeuchidze kuti nei vane kuravira kwakanaka: Ko shopper anga achifunga kechipiri here? Simbisa sarudzo yavo nezvakanaka zvevatengi zvipupuriro kana mushandisi ongororo kuti ubatsire kuvakurudzira kudzoka.
Ita kuti hupenyu hwavo huve nyore. Mari dzekutakura dzisingatarisirwi dzinowanzo taurwa sechikonzero chekusiiwa nengoro - mari zhinji dzekutumira dzinomisa kupihwa kweZororo kubva pakuwanda kwekutenga. Zvakadaro, ngoro yekudzosa meseji mukana wakanaka wekuyeuchidza vatengi nezve chero kubaya & kuunganidza kana imwe nzira yekuendesa yaunopa.
Bvisa chero kusahadzika: Uine mukana wekuchengetedza mari, muyedzo wekusunda uchave wakakwira kupfuura zvakajairwa. Nekudaro, kumhanyisa kunogona kukurumidza kutungamira mukuzvidemba uye kusiiwa usati watenga. Ipa simbiso mune yekudzosa meseji inonongedzera yako yekudzoka mutemo, chero mari yekumashure inovimbisa iwe yaunopa uye kana iwe uchiendesa mahara.
Kubva pamaonero emutengi, zviri nyore kunzwira tsitsi nezvimwe zvezvikonzero zvavo zvekubheja pakutengesa. Nenguva (uye inokurumidza kudzikira masheya emasheya) pamusoro pavo, kudiwa kwekureruka, nekukurumidza uye isina mushe Checkout maitiro kwakakosha. Kune iwo masayiti aida kodhi yakasarudzika yeChishanu Chishanu, kugona kushandisa nyore uye kuona mhedzisiro yesaphulelo (pamwe nemari yekuendesa) usati wasvika padanho rekubhadhara unogona kugadzira kana kuputsa shanduko.
Saizvozvowo, ndiko kudikanwa kwenzira dzakarongedzwa dzekunyoresa. Nevatengi vangangodaro vachishanyira nzvimbo dzavasati vamboita, kusavapo kwe 'muyenzi Checkout', kana kutarisana nefomu refu yekuzadza usati waedza kubata iyo yekupedzisira MacBook Pro inogadzira chakakosha chipingamupinyi.
Nemaitiro ekutarisa akakwenenzverwa uye akarongedzwa kuti asaita kusagadzikana padesktop, piritsi kana nhare, izere neakagadzirirwa zvakakwana ngoro yekudzosa arsenal, iwe uchiri nenguva yekukanganisa kushambadzira gore risati rapera.
Tags: 2016musi wezuvavatema vechishanu vatengibluevennzvidhinha nedhakakutenga pamhepoproseccoretailers
Curt Bloom ndiye Mutungamiri we BlueVenn US, yepasi rose multi-chiteshi kushambadzira software mupi. Curt akambobata chinzvimbo chikuru chehutungamiriri ne smartFOCUS uye aibatsira mukukura kwepasirese kwebhizinesi. Kubva ipapo, Curt anga achishanda neanoverengeka ekutanga eUS, munzvimbo dzemagariro enhau, chaiyo-nguva vatengi kubatanidzwa uye analytics. SaMutungamiriri weBlueVenn's US mashandiro, Curt ari kuona kuwedzera kweBlueVenn mhiri kweUS uye anotungamira timu inochengetedza vatengi veBlueVenn vekuAmerican.